UNGAYITHENGA PHI IBLACKBERRY TOKEN KUNYE NE-BBQ? - UKUTHENGA I-CRYPTO
Ungayithenga phi iBlackberry Token kunye ne-BBQ?
Inyathelo 5: Trade BB
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-BB ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lweBB
Ithokheni yeBlackBerry luphawu olutsha lweBinance Smart Chain eyilelwe ukwandisa inzuzo kwisizukulwana sokuvelisa i-DeFI.
Ithokheni yeBlackberry isebenza ngokusebenzisa umrhumo we-8% kwintengiselwano nganye kunye nangoko ukwahlula i-4% umva kwi-LP kunye ne-4% yemali kubo bonke abanini beethokheni ngokuzenzekelayo ezinganciphisiyo okanye zonyuse ubonelelo olupheleleyo kuba sisebenzisa ulungiso lweBlackberry .
Ixabiso langoku le-BB li- $ 0.00 kwaye libekwe kwi-2979 kwi-Coinmarketcap kwaye kutshanje liye lafikelela kwiipesenti ezingama-95.11 ngexesha lokubhalwa.
I-BB idweliswe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala uthenge i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-BB .
Ixabiso lentengo ye-deez yamanani e-crypto
SBhalisa i-Coinbase Bhalisela ukuBamba
indlela yokufumana kwakhona ii-imeyile ezisusiweyo
SBhalisa i-Coinbase kwaye ufumane i-10 yeedola! Bonisa iinkcukacha Amanyathelo ▾
Kutheni le nto ibhanki yam isala intlawulo yam yeapp
Kodwa asikenzi okwangoku. Sifuna ukuguqula i-BTC yethu ibe yi-BB. Njengoko i-BB idweliswe ngoku kwiPancakeSwap siza kukukhokela ngendlela yokuguqula i-BTC yakho eqongeni. Ngokungafaniyo nolunye utshintsho lwendawo enye amanyathelo okuguqula aya kwahluka kancinci kwiPancakeSwap kuba lutshintsho olusemthethweni (i-DEX) engafuni ukuba ubhalise iakhawunti kwaye ungahambi kuyo nayiphi na inkqubo ye-KYC, nangona kunjalo, ukurhweba kwi-DEX kufuna ukuba ulawule Isitshixo sakho sangasese kwisipaji sakho se-altcoin kwaye kuyacetyiswa ukuba ukhathalele isitshixo sakho ngasese, kuba ukuba ulahle izitshixo zakho, oko kuthetha ukuba uyakuphulukana nokufikelela kwiingqekembe zakho ngonaphakade kwaye akukho nkxaso yabathengi iya kukunceda ufumane izinto zakho umva. Nangona ilawulwa ngokufanelekileyo kukhuselekile ngakumbi ukugcina iiasethi zakho kwisipaji sakho sangasese kunakwizipaji zotshintshiselwano. Ukuba awukonwabisi ukusebenzisa i-DEX okwangoku, jonga ukuba ngaba i-BB iyafumaneka nakoluphi na unaniselwano lwesiqhelo olukwindawo yesiqhelo kwithebhu engentla. Ngaphandle koko masilandele la manyathelo ngononophelo.
I-PancakeSwap yi-DEX efanayo ne-Uniswap / Sushiswap, kodwa endaweni yoko iyaqhuba kwi-Binance Smart Chain (BSC), apho uya kuba nakho ukuthengisa zonke iithokheni ze-BEP-20 (ngokuchasene ne-ERC-20 tokens kwi-Ethereum blockchain), ngokungafaniyo ne-Ethereum, inciphisa kakhulu intlawulo yokurhweba (igesi) ngelixa ithengisa eqongeni kwaye ifumana ukuthandwa kutshanje. I-PancakeSwap yakhelwe kwinkqubo yemakethi ezenzekelayo (i-AMM) exhomekeke kumachibi okufumana imali ahlawulwa ngumsebenzisi yiyo loo nto inokusebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle kwencwadi yoku-odola yendabuko evela kutshintshiselwano lwendawo enye.
Ngamafutshane, njengoko i-BB ingumqondiso we-BEP-20 osebenza kwi-Binance Smart Chain, indlela ekhawulezayo yokuyithenga kukudlulisela i-BTC yakho kwi-Binance (okanye iintengiselwano ezidweliswe kwitafile engezantsi kubathengisi base-US), uyiguqulele kwi-BNB, emva koko yithumele kwisipaji sakho ngeBinance Smart Chain kwaye utshintshe iBNB yakho yeBB kwiPancakeSwap.
Nje ukuba ubhalise kwi-Binance okanye ukutshintshiselana okucetyisiweyo apha ngasentla, yiya kwiphepha lesipaji kwaye ukhethe i-BTC kwaye ucofe idiphozithi. Khuphela idilesi ye-BTC kwaye ubuyele kwi-Coinbase, rhoxisa i-BTC yakho kule dilesi kwaye uyilinde ukuba ifike, oku kuya kuthatha imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-30 kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwenethiwekhi ye-BTC. Ukufika kwe-BTC yakho kwi-Binance Coin (BNB)
Apha kuza elona candelo linzima lenkqubo, ngoku kuya kufuneka wenze isipaji sakho ukuze ubambe zombini i-BNB kunye ne-BB, kukho iindlela ezininzi zokwenza isipaji sakho, olona khetho kukusebenzisa isipaji sehardware, njengeLedger Nano S okanye ULedger Nano X. Zizixhobo ezikhuselekileyo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iiasethi zakho, kuya kufuneka ugcine amabinzana embewu kwindawo ekhuselekileyo kwaye ungaze uyibeke kwi-intanethi (okt sukufaka amabinzana embewu kuyo nayiphi na inkonzo yelifu / ukugcinwa / imeyile, kwaye musa ukuyifota). Ukuba ucwangcisa ukuhlala kwindawo ye-crypto okwethutyana, kuyacetyiswa ukuba ufumane isipaji sehardware.
Ngenye indlela unokwenza isipaji sakho, apha siza kusebenzisa iMetaMask njengomzekelo ukukubonisa indlela yokuseta isipaji sakho.
izixhobo zestudiyo zesitudiyo esibonakalayo
Sincoma ukusebenzisa iGoogle Chrome okanye iBrawuza eBrave apha. Yiya kwiVenkile yeWebhu ye-Chrome kwaye ukhangele iMetaMask, qiniseka ukuba ulwandiso lwenziwa ngu-https: //metamask.io ngokhuseleko kwaye emva koko ucofe ukongeza kwiChannel.
Bhalisa i-BitMart Bhalisa i-MXC
ukuhamba ngokukhawuleza kokuhlaziywa kweepilisi zamadoda
I-nodejs qr ikhowudi yokuvelisa
Intsholongwane ye-microsoft edge zeus
ukhaliphile vs chrome vs firefox
Iprojekthi yeJava yabaqalayo inyathelo ngenyathelo
Ndifuna ukuthenga i-shiba inu coin